Dagaalyahan katirsan Al-Shabaab oo iska dhiibay Dhuusamareeb | KEYDMEDIA ONLINE
Dagaalyahan katirsan Al-Shabaab oo iska dhiibay Dhuusamareeb
Dagaallame ka tirsanaa Al-shabaab ayaa isku dhiibey Ciidanka Booliska Dowladda Federaalka, ee ku sugan Dhuusamareeb.
DUUSAMAREEB, Soomaaaliya - Calas Axmed Xirsi, oo ka mid ahaa Kooxda Al-Shabaab ayaa dhawaan isku dhiibay ciidanka Boliiska Soomaaliyeed ee ku sugan Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug.
Calas, oo magaciisa Af-garashadu ahaa Careys, ayaa maanta loo soo bandhigay saxaafadda, wuxuuna sheegay in uu afar sano xubin ka ahaa Al-Shabaab, kana qeyb qaatay labo dagaal oo ka kala dhacay degaanka Bacaadweyn iyo duuleedka Dhuusamareeb.
Saraakiisha Ciidanka Boliiska, ayaa sheegay inuu xiriirro la soo sameeyay ka hor inta uusan soo gaarin degaanka Ceeldheere oo kaabiga ku haya magaalo madaxda gobolka Galgaduud.
Calas, ayaa sheegay in uu ka tanaasulay fikirkii Al-Shabaab, wuxuuna codsaday in la cafiyo, isagoo hoosta ka xariiqay in uu diyaar u yahay la dagaallanka Al-Shabaab.
Calas, oo dhallintiisu aad u yartahay ayaa Al-Shabaab uga biiray degaanka Ceel-meygaag, oo dhaca gobolka Galgaduud, kaas oo Al-Shabaab ay gacanta ku hayeen tan iyo 2008-dii.